Ski Okpu agha V04
Thermo na-achịkwa ihe mmịfe njikwa
Nwepu mpempe akwụkwọ nwere ike iwepu
Mbugharị nkasi obi,
Mbadamba nkasi obi na nti.
Na-ebu nku nku
Nnabata CE EN1077 ọkọlọtọ.
Typedị ngwaahịa Okpu agha snow
Nọmba nlereanya Ochie V04
Nkà na ụzụ Thermo na-achịkwa ihe mmịfe njikwa
Asambodo OA EN1077
Njirimara Thermo na-achịkwa ihe mmịfe njikwa
Ịgbatị nhọrọ Magnetik nkechi
Eriri super mkpa webbing Polyester
Ọdịmma usoro PAI 66
Igwe ọhụụ na-enweghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ mkpuchi okpu agha na mkpuchi ọkaibe ọnụ. Ọta a na-agbanwe agbanwe na-enye nchedo site na ọkụ UV na-emerụ ahụ mgbe ọ na-enye ya na oke elele anya na nghọta doro anya. The ọta bụ mgbochi scratching ike mkpuchi imecha na mgbochi foogu ọgwụgwọ. Na-enweghị mkpuchi anya na enweghị smudging mejupụtara, nweere onwe gị ma zuru ike mgbe ị na-eme ski.
Mwube ihe eji ebu ihe na ihu ihe mmịfe ihu, nye njikwa thermo ma nye ezigbo ikuku. Ntinye aka na mpempe ntị na-eme ka mpempe ntị wepụ ma wepụ ya. Kemeghi fit usoro, ka okpu agha omume ọma kechie & chebe isi. Na-echekwa, Kpoo ọkụ, gbanye ọhụụ, nwee ọ enjoyụ!
Globalkpụrụ zuru ụwa ọnụ akwadoro ọkọlọtọ CE EN1077, okpu agha maka ndị na-agba ịnyịnya alpine na ndị snowboarders.
Nke gara aga: Igwe okpu igwe V06
Osote: Freki Ski na snowboard okpu agha V10ski
Okpu agha Snowboard Chrome
Omenala Igwe eji eme njem
Okpu-agha Snowboard kacha dịrị nchebe
Ski & okpu agha
Skate abanye n'ụgbọ mmiri na ụmụaka V01KS
Freki Ski na snowboard okpu agha V10ski
Otutu PC Kechie chebe obodo skuuta okpu agha VU103